Wasiirka cusub ee caafimaada oo la dhaariyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka cusub ee caafimaada oo la dhaariyey
A warsame 19 August 2014
Mareeg.com: Wasiirka cusub ee caafimaadka Soomaaliya ee dhawaan xilkaas loo magacaabay, Cali Maxamed Max’ud ayaa manta lagu dhaariyey Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho.
Waxaa dhaarinta ka qeybgalay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), R/wasaare ku xigeen ahn wasiirka Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed iyo xubno kale.
Wasiirka cusub ee caafimaadka, Cali Maxamed Max’ud oo ka hadlay munsaabadda lagu dhaariyey aya inuu sii wadi doono shaqadii uu qabtay wasiirkii isaga ka horreeyey.
“Maanta ayaa ley dhaariyey, xilkana dhawaan ayaa la wareegi doon, iga horna howl fiican ayaa la soo qabtay, meeshaas ayaana kasii wadi doonaa” ayauu yiri Cali Maxamed.
R/wasaare ku xigeen ahn wasiirka Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay iney golaha wasiirada kusoo dhaweynayaan wasiirka cusub.
Xilka wasiirka caafimaadka waxaa horaantii bishaan August R/wasaare C/weli Sheekh ka Gen. Axmed Maxamed Max’ud iyadoo aan la shaacin sababta xilkaas looga xayuubiyey, waxaase la sheegay inuu shaqada gudan waayey.
Booqashadii Erdogan ee Soomaaliya oo saddex sano jirsatay (Sawirro)